INkokeli yeHlabathi yeHlabathi yeziXhobo zeKhitshi yeNkulumbuso / iROBAM
Uthotho lweCavity enzulu
Uthotho olwenziweyo lwe-T
Uluhlu loyilo olusecaleni
Uthotho lwe3D Flame
Uthotho lweGolide eMnyama
I-Combi Steam Oven
Izitya zokuhlamba izitya
Icandelo eliliYilo loCwangciso 671
Uluhlu lweHood Hood
Uluhlu lweHood eNtsha efakiwe
Uluhlu lweCrossover Range Hood
I-JZ (Y / T) -B396
Uthotho lweDEFENDI Burner Series
I-JZ (TY) -G511
Eyakhelwe-ngaphakathi isitovu sesitovu
Isitovu seKQWS-2350-R315B / S
I-KQWS-2350-R315B / S
I-Combi Steam sesitovu
Eyakhelwe-ngaphakathi isitovu seMicrowave
Uluhlu olutsha lweHood Hood A830
Ukuthula, ukunciphisa inqanaba lengxolo ukuya kwi-42dB ngokuthwala ibhola engathethiyo.
Ukuhlala, ukuqhubela phambili kweemoto ezifakwe ngokupheleleyo kunye nenkqubo entsha yokupholisa ubhedu. Kuhlala ngonaphakade.
I-Eco, yonga ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30 zokusebenzisa amandla ngokusebenza ngokukuko.
Eyakhelwe-Kuhovini yombane R312
Iphaneli yeglasi yentsimbi emnyama, i-classic Mirror, elula kunye nesitayile; Umgangatho ophezulu weAluminium Alloy Super Long handle, egudileyo kunye egudileyo, ekulula ukuyivula nokuvala; i-pop-up knob eguqukayo, ukubamba kube kanye kungabonakali, ngeqhosha lokuchukumisa ukuzisa amava afanelekileyo okusebenza okufanelekileyo;
Ukurekhoda amakhulu amawaka ovavanyo kumgangatho welebhu yethu yenqanaba lama-4000㎡.
Ngaphezulu kweentsapho ezingama-35000000 zikonwabela ukupheka ngokulula ukusuka eRobam kwihlabathi jikelele.
Iivenkile ezili-10000 + zokuthengisa
Yenza yonke into emnandi yoBomi beKhitshi kuBantu
Kule minyaka ingama-30 idlulileyo, i-robam yanikezelwa kulwakhiwo kufutshane
Izixhobo zeHangzhou Robam Co, Ltd. ziye zangumboneleli osemthethweni ...
Uvulindlela kuShishino lwezixhobo zeKhitshi! Umzi mveliso weROBAM 5G Smart uyeza!
Iimveliso ezimbini zeROBAM ziphumelele imbasa yeRed Dot Design
I-ROBAM Range Hood-No. 1 kwiNtengiso yeHlabathi kwiminyaka emi-5 elandelelanayo
Kutshanje, ngokweedatha ezivela kwi-Euromonitor International, umbutho wophando olugunyazisiweyo kwihlabathi liphela, ukusuka kwi-2015 ukuya kwi-2019, i-ROBAM range hoods ikhokele ukuthengiswa kwehlabathi iminyaka emihlanu ilandelelana, ukuqinisa isiseko seROBAM sokwenza uphawu lwehlabathi kunye nokubonisa iROBAM's en ...
Ukwenza ubomi bomntu ekhitshini lonke ulangazelelo oluhle